Umlaza weGemini: izici, indawo nezinganekwane | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Namuhla sizokhuluma ngenye yezinkanyezi ezibaluleke kakhulu ze-zodiac ngenxa yokufaneleka kwayo nendawo ezikuyo. Imayelana ne- i-constellation gemini. Itholakala cishe ku-30-30 ° enyakatho-ntshonalanga ye-Orion. I-Orion iyinkanyezi egqame kakhulu esibhakabhakeni futhi iyona egqame kakhulu, ngakho-ke iGemini ayinzima kangako ukuyibona ngeso lengqondo. Inezindaba eziningi ezinganekwaneni zamaGrikhi okufanele zikwazi.
Ngakho-ke, sizonikezela le ndatshana ukukutshela konke odinga ukukwazi mayelana nezici, indawo kanye nezinganekwane zomlaza weGemini.
2 Indawo nokwakheka kwe-constellation Gemini
3 Izinganekwane ze-Gemini constellation
5 Amaqoqo ezinkanyezi
Kuyinkanyezi yesithathu efaneleke kakhulu kuzodiac. Itholakala cishe ngama-30 degrees enyakatho-ntshonalanga ye-Orion. I-Orion iyinkanyezi ebonakala kunazo zonke esibhakabhakeni kanye neqoqo lezinkanyezi eliteleka kakhulu. Ibizwa ngokuthi "umzingeli we-cosmic." IGemini ibonakala ngeqembu elikhulu lezinkanyezi ezibonakala zisondelene noma zisondelene ngokubona nangokubuka komuntu, noma kunjalo iqiniso elibuhlungu ukuthi ziyiminyaka eminingana yokukhanya zihlukanisiwe noma azixhunyiwe nakancane.
Izazi zezinkanyezi zasendulo zanquma ukuxhumanisa lezi zinkanyezi nolayini abacabangayo. Ngale ndlela bakha amaphethini ahlukahlukene, izinto kanye nezibalo, futhi babanikeza amagama ezinkanyezi, yingakho uGemini azalwa njengophawu lwezinhlangothi.
Kuthiwa le nkanyezi ibonakala kuphela ngezikhathi ezintathu zonyaka. Lokhu ikakhulukazi, ekwindla nasebusika lapho kungabonwa khona eziteshini ze-hemisphere esenyakatho. Kodwa-ke, ehlobo kungabonakala eningizimu yezwe kusukela lapho Kuyinkanyezi ewele nezinye izinkanyezi ezikhanyayo. Ngokushesha nje lapho ibonwa, kungenzeka ukwazisa izinkanyezi zayo ezimbili eziqhakazile, ezibizwa ngeCastor nePóllux. Womabili anezinga elilinganayo lokukhanya futhi acebile ngezinkanyezi, izinkanyezi ezinomsila nokunye ukuhlobisa okufanele ukubonwa. Kungezinye zezizathu zokuthi kungani i-constellation Gemini ingenye ye-zodiac eyeyabantu abachazwa njengabazimele futhi abazimele.
Indawo nokwakheka kwe-constellation Gemini
I-constellation Gemini itholakala cishe ngama-30 degrees enyakatho-ntshonalanga ye-Orion, iqoqo lomzingeli lendawo yonke. Phakathi kwezici eziheha kakhulu lolu hlobo lwenkanyezi, sithola ezinye ezifana nalezi ezilandelayo:
Izinkanyezi ezimbili ezifanele kakhulu yizona ezikhanya kakhulu futhi ezibaluleke kakhulu. Akwaziwa ngegama likaCastor noPollux. Ngenxa yale nkanyezi yesibili kwatholakala iplanethi engaphandle kwemizila yelanga. Futhi inkanyezi inesisindo esikhulu ngokuphindwe kathathu ubukhulu beplanethi iJupiter. Inkanyezi uCastor icwaswa njengenkanyezi eningi, eyakhiwe ngezinto eziyisithupha.
Le nkanyezi inezinkanyezi ezimhlophe ezikhanyayo ngokwedlulele kwezinye zezikhathi zayo zomjikelezo. Futhi ingenye yezinkanyezi zezinkanyezi futhi ingeyesithathu ebaluleke kakhulu ngokuhambisana.
Itholakala cishe ngama-degree angama-30 enyakatho-ntshonalanga ye-Orion, iqoqo lomzingeli lendawo yonke.
Izinganekwane ze-Gemini constellation
Kuthiwa igama elithi Gemini livela ekubizweni kwamawele amabili anonya kakhulu futhi aphikisanayo uCastor noPóllux. Imvamisa bavela njengezingane ezimbili ezincane ezinqunu. Ekuchazweni kwale nkanyezi emlandweni wamaRoma, bahlobene noRomulus noRemus, babengabadali abadumile baseRoma ngaleso sikhathi.
Amawele kufanele ukuthi aqhamuke emaqandeni eNdlovukazi yaseSparta, ebizwa ngeLeda. Ngemuva kokuhlangana noZeus esifundeni se-swan, uCastor wabulawa esemncane, kanti uPollux waziphindisela ngokufa komfowabo. Okwamanje uZeus wehlela emhlabeni ukumnika isipho sokuphila okuphakade, uPolux wakwenqaba ethi akafuni ukuphila phakade ngaphandle komfowabo eceleni kwakhe. Ngakho-ke, UZeus wayefuna ukujabulisa uPóllux futhi wamvumela ukuba ashintshe phakathi kombuso wonkulunkulu nendawo yabafileyo ukuze ahambele umfowabo.
Kodwa-ke, uPoseidon waguqula la mawele aba ngabaqaphi nemihlahlandlela yamatilosi, yingakho izinkanyezi zasePolux naseCastor zihlala zitholakala phezulu noma ngaphezulu kwensika.
Ekufundweni kwezinkanyezi, iGemini ingesinye sezibonakaliso zomoya. Iyaziwa njengenye yezinkanyezi ezihlakaniphe kakhulu nezihlaziya iZodiac, ngoba amakhanda amabili angcono kunoyedwa futhi nangaphezulu ngakho-ke abantu ababili abaphikisana ngokuphelele. Le nkanyezi inezici eziningi ezinhle, kuyilapho ezimbi zinamandla futhi zinamandla. Ubugovu nokuzimela kungagqanyiswa ezinhlotsheni zabo ezimbi. Ngokuqondene nabantu abahle, bayamukela kakhulu futhi bahlakaniphile, futhi banomthelela omkhulu emvelweni yabo enamandla amakhulu okuzivumelanisa nayo.
Lesi sibonakaliso siphethwe yiMercury, okuvelele kunakho konke ukungumbili komcabango. Ngalesi sizathu, unikezwe ikhono lokuhlakanipha, ngoba abantu abazalelwe kulesi sibonakaliso bazokwazi ukuziqonda kahle. Kodwa-ke, isimilo sento ephethwe yilesi sibonakaliso kaningi siyinkimbinkimbi, asijwayelekile futhi siyashintsha. Zinhle kakhulu futhi zihloniphekile, zijabule futhi ziyacabanga, futhi zivame ukuzuza ekhonweni lokuthola lokho ezikufunayo.
Eqoqweni leGemini singathola okuthiwa amaqoqo ezinkanyezi avulekile noma amaqoqo emithala. Lawa ngamaqoqo ezinkanyezi akhiwa amafu wamangqamuzana futhi asakazeke kuwo wonke umthala.
Yizinkanyezi ezishisa kakhulu ezihlangana ngobuningi bazo. Amaqoqo ezinkanyezi avulekile atholakala kuphela emithala evunguza. Ibaluleke kakhulu lapho ifunda ukwakheka kwezinkanyezi eMilky Way, ngoba lezi zinkanyezi zineminyaka efanayo.
I-constellation Gemini nayo inezinhlobo ezibizwa nge-nebulae. Okunye okugqame kakhulu ngenxa yokuma kwayo i-Eskimo nebula. Inaleli gama langempela selokhu ukubonwa kubukeka njengobuso bomuntu obemboze ikhanda lakhe nge-hood, njengoba kwenza ama-Eskimo.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana ne-constellation yeGemini nezici zayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isayensi yezinkanyezi » I-Constellation gemini